Ny Instagram Checkout dia ampiasain'ny orinasa rehetra manan-kery ao Etazonia ary handeha manerantany ato ho ato.
Ny fiasa Checkout dia ahafahantsika mividy vokatra mivantana avy amin'ny app Insta anay. Manomboka izao, azontsika atao ny mametraka ny baiko mivantana ao amin'ny Insta rehefa mizaha ireo lahatsoratra azo soloina miaraka amin'ireo tagan'ny vokatra ankafizinay izahay.
Araka ny Instagram, Mpampiasa 130 tapitrisa no manindry lahatsoratra azo amidy isam-bolana, ary tsy mahagaga raha nametraka ny asany ny Instagram ankehitriny ” Zahao hoe ” azo alaina amin'ny orinasa rehetra any Etazonia.
Ny fitomboan'ny lazan'ny “Lahatsoratra azo alefa” nanova haingana ny Insta ho sehatra e-varotra. Ny endri-javatra Checkout izao dia hameno ity fanovana ity ary hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa ho lasa tsara kokoa.
Azontsika atao izao ny manisy tsindry amin'ny vokatra tadiavintsika ary mandoa mivantana amin'ny Instagram ho an'io vokatra io. Ny fomba fividianana anay dia tsy mora velively tamin'ny sehatra media sosialy hafa.
Nanova tanteraka ny fomba fiantsenanay sy nanova ny fomba fampiasan'ny orinasa ny fivarotany Insta izy ireo..
Ho an'ny tompona orinasa, ny fahaizana manova haingana ny mpihaino azy amin'ny fizahana tsotra fotsiny amin'ny fividianana vokatra nefa tsy mila miala amin'ny fampiharana Instagram fa mitombo ny taham-barotra.
Raharaham-barotra, ny influencers ary ny mpampiasa dia hiaina fotoana mampihetsi-po amin'ny fampiasa amin'ny fandoavambola.
Tokony hampiasa Instagram Checkout ianao?
Betsaka amintsika no efa nampiasa ny sehatra Insta ho an'ny varotra sy dokam-barotra nandritra ny taona maro izao., ary fantatray ny maha-zava-dehibe an'izany amin'ny paikadinay momba ny varotra.
Fa ny fanovana vao tsy ela akory izay tamin'ny taon-dasa dia manamboatra tanteraka an'ity sehatra ity ho tsara.. Tsy tokony hatao sehatra fanaovana dokambarotra fotsiny io.
Ny fampisehoana Instagram Checkout dia manome sehatra mora ho an'ny mpanjifanay, izay ahafahan'izy ireo mividy ny vokatray.
Ity taona ity, Instagram dia nanandrana nampiditra orinasa sy marika betsaka araka izay tratra tamin'ny alàlan'ny areti-mandringana.
Izy ireo dia nanaparitaka ny tontolon'ny fivarotana manerantany ary nanakodia ny kaody QR hanampiana anay hampitombo ny orinasanay amin'ny Insta.
Instagram nitatitra fa ny 80% amin'ny kaonty dia manaraka kaonty fandraharahana, izay manazava tsara ny antony niasan'izy ireo mafy mba hahazoana antoka fa afaka mahazo tombony betsaka amin'ny sehatra izahay.
Ity no fomba ahafahan'ny mpampiasa mividy ny vokatray amin'ny dingana vitsivitsy:
• Tsindrio ny kisary fividianana
• Tsindrio ny vokatra aseho
• Kitiho ny kaonty vola
• Ampidiro ny antsipirian'ny karatra sy ny mombamomba ny faktiora
• Tsindrio ny filaharana toerana
Ahoana ny fomba fangatahana amin'ny Checkout Instagram?
Afaka mampiasa Instagram Checkout ianao izao any Etazonia, fa tsy maintsy alamino aloha ny fivarotanao.
Ny kaontinao dia mifamatotra amin'ny pejinao Facebook na amin'ny Shopify, izay ahafahan'ny Insta mamerina ny mombamomba anao sy ny mombamomba ny vokatra.
Mampiasa ny mombamomba anao i Insta mba hamoronana ny mari-pamantarana ny vokatrao hahafahanao mametaka ny vokatrao amin'ny sarinao, horonan-tsary sy IGTV izao.
Rehefa avy nanangana ny magazanao tamim-pahombiazana, azonao ampiasaina ity forme eto mangataka ny Checkout.
Raha tsy any Etazonia ianao, miomàna ary amboary ny fivarotanao. Manomboha manomboka mampiasa ny fiasa fandoavam-bola raha vantany vao naparitaka manerantany.
Ahoana no ahazoana tombony betsaka amin'ny kitapom-bolanao
Manana sosokevitra vitsivitsy ho anao izahay mba hahazoanao tombony betsaka amin'ny fampisehoana Instagram Checkout anao., ary izao, azonao antoka fa hampitombo ny varotrao koa.
1. Azonao atao ny manisy marika ny vokatrao amin'ny endrika atiny rehetra
Aza ferana ny marika raha te hampitombo ny varotrao. Aza adino ny manisy marika ny vokatrao isaky ny endrika atiny. Araraoty tsara ny sary sy horonan-tsary.
Amin'ny alàlan'ny famolavolana ireo marika amin'ny endrika atiny samihafa, azonao antoka fa mahatratra olona betsaka araka izay azo atao mahita ny atiny ianao.
Arakaraka ny fahitana ny vokatrao, mora kokoa ho an'ny mpihaino anao ny mahatsikaritra sy mividy aminao amin'ny alàlan'ny fampisehoana fizahana.
2. Fiaraha-miasa amin'ny influencers
Goavana ny fampiroboroboana, ary derain'ny mpanaraka azy akaiky izy ireo. Tokony hanome voninahitra azy ireo isika satria tsara amin'ny zavatra ataony.
Maro amin'izy ireo no nahomby tamin'ny famolavolana hatrany ny sehatra manokana nananany tamin'ny alàlan'ny fanaovana sy famokarana atiny am-boalohany ho an'ireo mpanaraka azy mahatoky.. Izany no fomba fivelomany, ka tsy maintsy mahafantatra zavatra iray na roa izy ireo.
Miara-miasa amin'ny influencers sy mpihazona kaonty mpamorona izay afaka manisy marika marika mivantana ny vokatra ao anaty ny atiny, azonao atao ny manao dokambarotra an-kerisetra kokoa eo amin'ny sehatra misy azy ireo, fa amin'ny fomba tena izy.
Tsy ny vokatrao ihany no ho voamariky ny mpanaraka azy haingana, fa fomba hendry koa hanaovana dokambarotra ny tenanao, tsy manandrana mivarotra ny vokatrao mivantana.
3. Mampiasà carousels
Ny fampiasana carousels amin'ny vokatrao dia mety hahatratra ny mpihaino anao haingana kokoa, fa mandaitra. Arakaraka ny maha-mahafinaritra ny sary ny vokatrao, ho mora kokoa ny hisarika ny sain'ny mpihaino anao.
Mahaiza mamorona ary mamorona sary miaraka amin'ireo vokatrao. Amin'izao fomba izao, tsy vitan'ny hoe manome marika vitsivitsy ny vokatra vitsivitsy ao anaty atiny iray ianao, fa koa hanondro ireo vokatra ireo miaraka ary haingana kokoa.
Ny asa fivarotana sy fandoavam-bola dia manova haingana ny Insta ho sehatra lehibe kokoa noho ny hatramin'izay. Hamarino tsara fa hajanona hatrany ary ampahafantaro ny tenanao amin'ireo fiasa efa misy sy vaovao navoaka..
Ny ekipa Instagram dia niasa mafy nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay mba hanomezana izay ilainao sy antenainao, ka alao antoka fa manararaotra tanteraka ny tombontsoa rehetra arosony ianao.
Lahatsoratra teo alohaNy IGTV Shopping dia misy amin'ny Instagram izao
Lahatsoratra manarakaAuto Toy ny Instagram: Bot ho an'ny tiana mandeha ho azy